Poco F1 ala India dị ka ụdị Xiaomi ọhụrụ | Gam akporosis
Poco F1 dị ebe a, akara ọhụrụ ọhụụ Xiaomi na ọnụ ala dị ọnụ ala
Pocophone bụ ụdị Xiaomi ọhụrụ nke ahụ taa gosipụtara mobile mbụ ya: Poco F1. Njedebe dị elu na ọnụ ala karịa ihe anyị ji Xiaomi eme. Ọ dị ịtụnanya na anyị na-ekwu ya, mana ọ bụ otu ahụ.
Poco F1 bụ mobile nke ejiri mara Snapdragon 845 octa-isi chip, 6GB / 8GB Ram, nchekwa dị n'ime nke na-adịghị ada n'okpuru 64GB n'ụdị ọkọlọtọ ya, ihuenyo 5,99 nke nwere AMOLED teknụzụ, 12MP na 5MP igwefoto azụ abụọ, batrị 4.000 mAh na kedu ihe ụda olu 3,5 mm nke anyị tinyere ya dị ka akụkụ pụrụ iche n'ihi ochicho ka ndi ozo kpochapu ya na njedebe di elu.
1 Ọhụrụ Xiaomi ika na-eji ike
2 Igwefoto abụọ na batrị iji pụta
3 Poco F1 ọrụaka nkọwa
4 Obere ihe ịga nke ọma na F1 gị
Ọhụrụ Xiaomi ika na-eji ike
Poco Ọ bụ akara ngosi ohuru nke Xiaomi nke ji nnukwu ọchịchọ abịa de zaa ahịa juru eju ọzọ nke ụdị ngwaọrụ dị iche iche n'ọtụtụ ọnụahịa. Anyị chọrọ ịma ihe niile gbasara Poco F1 ọhụrụ nke egosiri taa na India, yabụ ka anyị rute ya.
Na imewe anyị na-ahụ ọkwa, nke bụ ụzọ nke ịnwa ime ka onye ọrụ mara na ha chọrọ ịnọ na ọnọdụ ọhụrụ enyere, ọ bụ ezie na anyị ka na-eche Google iji kwado akụkụ a na ekwentị mkpanaaka. Na Poco F1 ihe onwunwe bụ polycarbonate, mmewere nke na-amata ọdịiche dị na ndị ọzọ dị elu mgbe ha gbaa maka iko ma ọ bụ ọla.
Ihe ha echefubeghi na akara ọhụrụ Xiaomi bụ ibinye Poco F1 ikike niile ị nwere ike ịhazi site na mgbape Qualcomm's Snapdragon 845. The mgbawa na-esonyere abụọ variants na RAM ebe nchekwa nke 64 ma ọ bụ 128 GB, na esịtidem ebe nchekwa na ike ga-ahọrọ n'etiti 64, 128 na 256GB. Ee ee, ị nwekwara nhọrọ iji bulie ya na micro SD ruo 256GB.
Ihuenyo ahụ na-ewetakwa agwa ọma ya na a 5,99 nke anụ ọhịa ahụ, mkpebi 22280 x 1080 pikselụ yana usoro 18: 9 maka panel AMOLED. A na-egosi Poco F1 dị ka ọnụ ọgụgụ zuru oke nke iji nwee ọ experienceụ ahụmịhe gam akporo na-enweghị ịhapụ anya nke ihu, dị ka anyị na-ahụ na nkọwa ya.
Igwefoto abụọ na batrị iji pụta
Enweghị ike ịhapụ ekwentị adịchaghị na-enweghị batrị na-enye gị ọtụtụ awa ihuenyo, na-agbalị iso na ntanetị nke Samsung Galaxy Note 9 na-egbuke egbuke, Poco F1 nwere 4.000 mAh nke ikike batrị ka ị wee nwee ike iji ụbọchị ahụ chekwaa n'ewepụghị onwe gị n'iji ngwa ndị na-ewepụta nnukwu oriri.
Onye ọzọ dị ka ihu ọma ya dị na foto, ọ bụ ezie na ọ naghị apụ apụ ọkachasị ihe ọ bụla ma na - agbaso usoro igwefoto 12MP na 5MP abụọ na azụ na a otu igwefoto 20MP ke iso. Enweghị ụrọ sọftụwia ahụ na sistemụ Pixel abụọ ka foto wee ghara ịpụ n'anya n'ụdị ọnọdụ niile.
El infrared Advanced ihu unlock kpọghee ekwt Ọ bụ otu ihe ahụ a na-agbakwunye Poco F1 maka ekwentị nke nwekwara njirimara nke nwere oyi akwa MIUI; ọ bụrụ na ịchọrọ Xiaomi ọzọ na-enweghị akwa oyi akwa ahụ, lee gi ohuru Mi A2 ya na gam akporo.
Poco F1 ọrụaka nkọwa
Usoro njikwa A gam akporo 8.1 Oreo MIUI 9.5
Ihuenyo 5.99-anụ ọhịa AMOLED 2280 x 1080 18: 9
Nhazi Qualcomm octa-isi Snapdragon 845
Nchekwa n'ime 64/128/256 GB nwere ike ịgbasa na ebe nchekwa microSD ruo 256GB.
Isi ụlọ Dual 12 MPX + 5 MPX
Igwefoto ihu 20 MPX f / 2.0
Ihe ndị ọzọ Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka - USB-C njikọ - 3.5mm Jack
Obere ihe ịga nke ọma na F1 gị
Poco F1 bụ ọnụ na ọ ga-atụ anya nke ọma n'akụkụ ndị a Chọta ekwentị adịchaghị na-enweghị enweghị akara mkpisiaka aka na azụ, ụgwọ ya ngwa ngwa, USB Type-C ọdụ ụgbọ mmiri yana gam akporo 8.1 Oreo nke a ga-emelite na gam akporo 9 Pie na njedebe nke afọ.
Ndị a bụ ụdị dị iche iche nke edebere ere maka taa n'India:
Poco F1 6GB Ram na 64GB esịtidem ebe nchekwa: euro 260 ịgbanwe.
Poco F1 6GB Ram na 128GB esịtidem ebe nchekwa: euro 300 ịgbanwe.
Poco F1 8GB Ram na 256GB esịtidem ebe nchekwa: euro 360 ịgbanwe.
El Poco F1 dị ugbu a site taa na India ọ ga-esokwa Armored Edition na 8GB RAM na 256GB nke ebe nchekwa dị n’ime. Ugbu a, anyị kwesịrị ịpụ maka ala anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Poco F1 dị ebe a, akara ọhụrụ ọhụụ Xiaomi na ọnụ ala dị ọnụ ala